Coagulant N'ihi Agba Fog
Arọ Metal Wepụ Ukwu
Mmiri Mmiri Na-ekewapụta Onye Ọrụ
Na-eme ihe ike
Flocculant N'ihi Petroleum Sewage
Akpata Flocculant Pụrụ Iche Maka Ngwuputa
Formaldehyde-Free Fixing Ukwu
Agba idozi Ukwu
Chemicals maka Ro Membrane
Mmiri Decoloring Ukwu CW-08
A na-ejikarị CW-08 eme ihe eji eme mmiri iji na-emeso mmiri mkpofu site na textile, mbipụta na dyeing, ịme akwụkwọ, agba, agba, ink, ink na-ebi akwụkwọ, kemịkalụ, mmanụ ala, petrochemical, mmepụta coking, ọgwụ na ubi ndị ọzọ. Ha nwere ikike iduzi agba, COD na BOD.
Mmiri na-ekpuchi mmiri CW-05
A na-ejikarị ihe ndozi CW-05 eme ihe ịchọ mma na mmepụta mkpofu mmiri na-ewepu agba.
A na-etinye Poly DADMAC n'ọrụ na mmepụta nke ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche na ọgwụgwọ nsị.
DADMAC bụ ịdị ọcha dị elu, na-achịkọta, quaternary ammonium nnu na nnukwu ụgwọ cationic monomer dị elu. Ọdịdị ya bụ ihe na-enweghị ntụpọ na mmiri transperent na-enweghị isi na-ewe iwe. DADMAC nwere ike ịgbari na mmiri dị mfe. Usoro nhazi ya bu C8H16NC1 na ogo ya bu 161.5. Enwere njikọ nke okpukpu abụọ nke alkenyl na ngwongwo ala ma nwee ike mepụta homo polymer na ụdị copolymers site na mmeghachi omume polymerization dị iche iche.
A na-etinye PAM-Anionic Polyacrylamide n'ọtụtụ ebe na mmepụta nke ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche na ọgwụgwọ nsị.
A na-etinye PAM-Cationic Polyacrylamide n'ọtụtụ ebe na ụdị dị iche iche nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọgwụgwọ nsị.
A na-etinyere PAM-Nonionic Polyacrylamide na mmepụta nke ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche na ọgwụgwọ nsị.
A na-etinye polyamine n'ọtụtụ ebe na mmepụta nke ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche na ọgwụgwọ nsị.
Ngwaahịa a bụ ezigbo inorganic polymer coagulant. Ubi Ntucha A na-etinye ya na mmiri dị ọcha, ọgwụgwọ mmiri mmiri, nkenke nkenke, mmepụta akwụkwọ, ụlọ ọrụ ọgwụ na kemịkal kwa ụbọchị. Uru 1. Mmetụta ya dị ọcha na obere okpomọkụ, obere turbidity na mmiri na-emetọ mmiri na-adịghị ọcha dị mma karịa ndị ọzọ flocculants organic, Ọzọkwa, a na-ebelata ọgwụgwọ ọgwụgwọ 20% -80%.
ACH - Aluminom Chlorohydrate
Ngwaahịa ahụ bụ onyinye macromolecular inorganic. Ọ bụ ntụ ntụ na-acha ọcha ma ọ bụ mmiri na-enweghị ụcha. Ubi ngwa A na - agbaze ya ngwa ngwa na mmiri na corrosion.It n'ọtụtụ ebe a na - eji ya dị ka ihe arụ maka ọgwụ na ọgwụ ndị na - ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya (dịka antiperspirant) na ụlọ ọrụ kemịkalụ kwa ụbọchị; mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, ụlọ ọrụ na-ekpofu mmiri.
Coagulant maka agba foogu mejupụtara gị n'ụlọnga A & B. Mara mọbụrụ na A bụ otu ụdị pụrụ iche ọgwụgwọ chemical eji wepụ viscosity nke agba.
Arọ Metal Wepụ Ukwu na-ebe etinyere na mmepụta nke dị iche iche nke ulo oru ulo oru na nsị ọgwụgwọ.